Lanonana tetsy Analakely :: Niavaka ny fampisehoana samihafa nandritra ny matso • AoRaha
Lanonana tetsy Analakely Niavaka ny fampisehoana samihafa nandritra ny matso
Nizotra am-pilaminana ny matso notanterahin’ny fianakaviamben’ny Foloalindahy, tetsy amin’ny araben’ ny Fahaleovantena, Analakely, omaly maraina. Tsy nisy tomika ny fizotran’ny lanonana ary nivohitra tao anatin’ireo hetsika nanamarihana ny faha-60 taona niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara sy ny fetin’ny Foloalindahy malagasy ny fisian’ireo fampisehoana tamin’ny fihetsika mirindra sy fanehoan-kery ara-miaramila isan-karazany.
Tamin’ny 10 ora maraina tsy diso no nigadona nanoloana ny lapan’ny tanàna ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Lahateny fohy niarahaba ny Foloalindahy noho ny fahatratrarana ny faha-60 taona nijoroany no nataony mialoha ny niakarany tamin’ilay fiara marika “Cadillac”, nampiasain’ny filohan’ny Repoblika voalohany, Tsiranana Philibert ka nandehanan’ny Filoha am-perinasa tamin’ny fisafoana ny andiantafika. Io no anisan’ny endrika nampiavaka ny hetsika, omaly.
Pataloa mainty mitsipika fotsy sy akanjo vita amin’ny lamba landy misy paozenitra volomboasary no nisaloran’ny Filoha.
Mpitandro filaminana miisa valopolo amby zato sy telo arivo no nandray anjara tamin’ny matso lehibe, tetsy Analakely. Nisy ny fanokanana toerana nanoloana ny lampihazo nisy an’ireo manam-pahefana ka nanatanterahan’ireo mpianatra avy ao amin’ny Akademia miramila ao Antsirabe (Acmil) sy ny Sekoly fanofanana mpitandro ny filaminana ao Fianarantsoa (Semipi) ireo fihetsika manokana narahina mozika izay nisantarana ny matso teny amin’ ny kianjan’ny Fahaleovantena.
Nifanesy, taorian’izay, ny matson’ireo mpitandro filaminana an-tongotra sy tamin’ny fiara ary an’habakabaka. Niavaka tao ny fahitana an’ireo fiaran’ny tafika vaovao miloko mainty sy ireo môtô marika “Gasycar” nentin’ireo Polisim-pirenena.
Nahazo dera manokana kosa ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy miisa sivy amby fitopolo avy amin’ny zandarimariam-pirenena sy ny Tafika, izay miandraikitra ny ady amin’ny tsimok’aretin’ ny Covid-19. Naharitra adiny iray sy sasany mahery kely teo ny matso tetsy Analakely.
Fifamaliana niteraka vono olona :: Tovolahy voatifitra, rehefa avy nanindrona antsy ny rahalahiny
Fanovan-drafitra ny tafika malagasy :: Manamboninahitra an-jatony miatrika fifantenana